Amafulegi Esihloko Sokuphrinta Kwe-Duplex
Leli fulegi likanhlokweni wokuphrinta we-duplex lingaphrintwa ngobuningi ezinhlangothini zombili zendwangu engqimba eyodwa. Futhi indwangu yekhwalithi neyinki yokuphrinta isiza ukukhiqiza umbala ogqame kakhudlwana. Umphumela wokuphrinta kwesibuko uqinisekisa ukuthi umkhiqizo wakho kanye nelogo kuvezwe kabili.
Ukuma kwendwangu okugobile kwendwangu uhlobo lwethuluzi lokubonisa elisha elingaletha umlayezo wakho ngendlela yesitayela. Ilungele ukusetshenziswa emibukisweni yezohwebo, imibukiso noma okwasemuva kokuthengisa, ukuma kwendwangu okuzivelelayo kulula ukuhlangana nomfanekiso wendwangu ophrintiwe.